ဝီကီပီးဒီးယား ၂၀/ဖြစ်ရပ်များ - Meta
အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောစာရင်းတွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုပြီး သင်၏ တည်နေရာတွင် ဖြစ်ရပ်တစ်ခုမရှိကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏ ဖြစ်ရပ်အတွက် စာမျက်နှာတစ်ခုဖန်တီးပါ
သင်၏တည်နေရာ အမည် (ဥပမာ၊ လန်ဒန်)ကို အောက်တွင်ရိုက်ထည့်ပါ၊ ထို့နောက် "သင်၏ ဖြစ်ရပ်ကိုဖန်တီးရန်" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
သင့်၏ ဖြစ်ရပ်ကို အခြားသူများ တွေ့ရှိရန်ကူညီပါ
အခြားသူများက ၎င်းကိုရှာတွေ့ရန် သင်၏အဖြစ်အပျက်စာမျက်နှာကိုစာရင်းထဲသို့ထည့်ခြင်းဖြင့် ကူညီပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ၎င်းကို သင်၏ဒေသ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကဏ္ဍ နှင့် ဖြစ်ရပ်ပြက္ခဒိန်များတွင်ထည့်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
virtual ဖြစ်ရပ်တစ်ခု စီစဉ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်များအတွက် ဒီကိရိယာတန်ဆာပလာကိုကြည့်ပါ
သင်၏ ဖြစ်ရပ်အတွက် ထောက်ပံ့ကြေးများ
ဝီကီပီးဒီးယား ၂၀ အခမ်းအနားများအတွက် ရရှိနိုင်သည့် ထောက်ပံ့ငွေများနှင့် လျင်မြန်စွာ ထောက်ပံ့ကြေးအတွက် မည်သို့လျှောက်ထားရမည်နှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းအချက်အလက်ကိုရှာပါ ။
သင်၏ ဖြစ်ရပ်ကို ဤစာရင်းတွင်ထည့်သွင်းရန် ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ. ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ဤစာမျက်နှာ၏အောက်ခြေရှိ ဖြစ်ရပ်များပြက္ခဒိန်တွင် သင်၏အဖြစ်အပျက်ကိုထည့်သွင်းရန်မမေ့ပါနှင့်။
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikipedia_20/Events/my&oldid=21107335"
This page was last edited on 13 February 2021, at 14:41.